१७ बर्षपछि नेपाल र अमेरिकी विदेशमन्त्रीको भेट
१ असोज, काठमाडौं । भोलि विहान अमेरिका भ्रमणमा जान लागेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र अमेरिकी समकक्षी माइकल आर पेम्पोबीच पुस ३ गते भेटवार्ता हुने भएको छ । १७ वर्षपछि दुई देशबीच हुन लागेको औपचारिक भ्रमणका क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी समकक्षीसँग १८ डिसेम्बर अर्थात पुस ३ गते मंगलबार भेटवार्ता गर्ने परराष्ट्रमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको भ्रमण तालिकामा उल्लेख गरिएको छ । भ्रमणका क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले ह्वाइटआउसका उच्च अधिकारी, अमेरिकी...
नेकपाले सरकार नचलाएको वामदेव गौतमको भनाइ
काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले शनिबारदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा छुट्टै प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । १६ पेजको उक्त प्रतिवेदनमा पार्टी र सरकारका कमीकमजोरीलाई नेता गौतमले प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छन् । पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको ९ महिना अवधिका उपलब्धिलाई बुँदागत गरेर राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । अध्यक्षद्वयले सरकारको बचाउ गर्दै पेश...
नेकपाका दुई अध्यक्षबीच फाटो ल्याउन खोजिएको प्रधानमन्त्री ओली को भनाइ
१ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई अध्यक्षबीच फाटो ल्याउन प्रतिक्रियावादीहरुले कोशिस गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । दुई अध्यक्षबीचको एकतालाई तोड्न जति प्रयास गरे पनि सफल नहुने पनि स्पष्ट पारे । देशलाई समृद्ध बनाउन गरिएको दुई अध्यक्षबीचको एकता कसैले पनि तोडन् नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले असभ्य ढंगले प्रस्तुत हुने बुद्धिजीविहरुलाई आफूले...
मिल्ने भए दुई जनानै प्रधानमन्त्री हुन्थ्यौं: प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं–प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई अध्यक्षबीच फाटो ल्याउन प्रतिक्रियावादीहरुले कोशिस गरिरहेको दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई अध्यक्षबीचको एकतालाई तोड्न जति प्रयास गरे पनि सफल नहुने पनि स्पष्ट पारे । देशलाई समृद्ध बनाउन गरिएको दुई अध्यक्षबीचको एकता कसैले पनि तोडन् नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले असभ्य ढंगले प्रस्तुत हुने बुद्धिजीविहरुलाई आफूले सचेत गराउँदा पनि त्यसलाई...
अन्ततः झुके महिन्दा राजापाक्षे,दिए राजीनामा!
श्रीलंकाका विवादास्पद प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेले राजीनामा दिएका छन् । राजापाक्षेको यो निर्णयले केही हप्ताको राजनीतिक संकट टुंग्याउने संकेत देखिएको छ । कोलम्बोस्थित आफ्नै निवासमा आज उनले आफ्ना समर्थक र पत्रकारको अघिल्तिरै बसेर राजीनामापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ७३ वर्षे नेता राजापाक्षेले समर्थक तथा पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दै मैथ्रिपाला सिरिसेनालाई नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खुला गर्न राजीनामा दिएको बताएका छन् । पछिल्लो अक्टोबरदेखि श्रीलंकामा राष्ट्रपति मैथ्रिपाला सिरिसेना...
बैशाखदेखि बसहरु यातायात प्राधिकरण मातहात ल्याउने मन्त्री महासेठको भनाइ
२९ मंसिर, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पूरानो कानुनका कारण बसहरु कम्पनीमा आउन नसकेको बताएका छन् । अहिलेसम्म १०/१२ हजार मात्र बसहरु कम्पनीमा आएको भन्दै उनले अब यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने बताए । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री महासेठले भने, ‘यसको लागि समिति बनाइसकेका छौं । यो समितिले आउने साताभित्रै प्रतिवेदन दिन्छ । अब नेपालको...
सिंहदरबारमा घाम ताप्दै कांग्रेस प्रतिनिधि !
२९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका देशैभरिका अगुवा कार्यकर्ताहरु काठमाडौंमा भेला भएका छन् । काठमाडौंको मौसम निकै चिसो छ । महासमिति बैठकमा भाग लिन राजधानी आएका कांग्रेस कार्यकर्तालाई घाम प्यारो लाग्न थालेको छ । आजबाट सुरु हुने महासमिति बैठकको उदघाटनमा ढिलाइ भएपछि शनिबार बिहान कांग्रेसका प्रतिनिधिहरु घाम ताप्न ब्यस्त देखिए । बैठकको उदघाटन दिउँसो एक बजेपछि सुरू भएको छ । बिहान ११ बजे सिंहदरबार नजिकैको यलम्बर...
वीपीको ‘सेक्स फ्री’देखि ‘मीटू अभियान’
२९ मंसिर, काठमाडौं । महासमिति बैठकमा जुटेको नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक, आर्थिक र सांगठानिक विषयमा सघन छलफल गर्दैछ । तर, ‘फ्रायडवादी’ वीपी कोइरालालाई ‘महामानव’ बताउँदै आएको कांग्रेसभित्र सांस्कृतिक बहसचाहिँ खासै हुन सकेको छैन । कांग्रेसका दुई नेतृलाई एकैखालको प्रश्न – ‘परस्त्रीगमन’ लाई छाड्न नसक्ने वीपी कोइरालाले महिलाहरुलाई दिएको न्यायचाहिँ के हो ?’ दुबै नेतृको जवाफ लगभग उस्तै आयो । उनीहरुले यौनको मामिलामा वीपीको विचार व्यक्तिगत मात्र भएको...